Overcast inovandudzwa nekuvandudza zvishoma mushandisi wayo uye kuwedzera mabasa matsva | IPhone nhau
Overcast inovandudzwa nekuvandudza zvishoma mushandisi wayo uye kuwedzera mabasa matsva
Parizvino muApp Store tinogona kuwana huwandu hukuru hwezvishandiso zvinotibvumidza kunakidzwa nepodcast yedu yatinoda tisingashandise application yechizvarwa. Aya maapplication anotipa isu zvinonakidza zvisingawanikwe mukushandisa kwakagadzirwa neApple, nekudaro vane gap kune vashandisi vanoteerera kune urwu rudzi rweodhiyo gwaro rinoshanda zuva rega rega. Overcast ichangowana iyo nyowani nyowani iyo yakavandudza mushandisi interface, ichivandudza mashandiro uye maficha ayo aakatipa kusvika zvino.
Kutanga, iyo icon yakagadzirwazve zvishoma nekubvisa iyo shading iyo yaive nayo kumashure kuti ienderane, zvakatowanda kune izvo zvinodiwa neApple mune izvi. Inotipawo isu widget nyowani iyo yatichakwanisa kudzora kutamba kwepodcast. Iyo peek & pop ficha iripowo mune ino gadziriso, ichitiratidzira tarisiro yeiyo chaiyo podcast. Nekusvetukira kurudyi, mune rondedzero yemapodcast akamirira kuteerera, tichaona nyowani odhiyo uye nekumhanyisa kutonga, chinja icho chaimbove chinongowanikwa mukati mega podcast
Marco Arment, Overcast mugadziri uye Instapaper musiki, Iyo mari yaunowana kubva mukushandisa kweichi chishandiso yachinja zvakare. Mwaka wadarika, yakasarudza kushandisa yemaitiro ekuzvipira ekuzvipira, ayo vashandisi vaigona kubhadhara kana vakaona zvakakodzera kushandisa chishandiso, iko kunyorera kwanga kusine chero rudzi rwekushambadzira. Nguva pfupi yapfuura, yakatanga kuratidza kushambadzira kune vese vashandisi avo vasina kusarudza iyi sisitimu. Nechivandudziso chitsva ichi, Arment anovhura zvakare yeiyo ad system kuti akwanise kushandisa kunyorera mahara, ma ads atinogona kubvisa kana tikapfuura mubhokisi uye kubhadhara 9,99 euros.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Overcast inovandudzwa nekuvandudza zvishoma mushandisi wayo uye kuwedzera mabasa matsva
Wiseplay inogadziridzwa ichiwedzera kunatsiridza kwakakosha